नझुक्किनोस्, युएईका नेपालीलाई सरकारले उद्धार गरेको होइन ! – Namaste Dainik
June 5, 2020 July 17, 2020 NamastedainikLeaveaComment on नझुक्किनोस्, युएईका नेपालीलाई सरकारले उद्धार गरेको होइन !
२३ जेठ,काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण र लकडाउनका कारण विभिन्न मुलुकमा अलपत्र नेपालीहरुको उद्धार सुरु भएको छ । शुक्रबार युएईबाट १६९ र म्यानमारबाट २६ जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । तर,नेपाली दूतबासले बनाएको सूचीअनुसार यूएईबाट नागरिकहरु आउन पाएनन् ।
सरकारले विदेशबाट उद्धार गर्न विभिन्न मापदण्डहरु तोकेको छ । सजायँबाट आम माफी पाएका,डिटेन्सन सेन्टरमा रहेका,जुनसुकै कारणले बहिर्गमन भिसामा रहेका,आफन्तको मृत्यु भई काजकिरियाका लागि आउनुपर्ने, भिसा सकिएका, रोजगारी गुमाएका,कोभिड-१९ बाहेकका गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका, सुत्केरी,ज्येष्ठ नागरिक लगायत छन् ।
त्यस्तै सरकारी सेवामा रहेर अध्ययन र तालिममा गएका, अध्ययन सकिएका विद्यार्थी लगायतलाई पनि प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश ल्याउने भनिएको छ ।
नेपाली अधिकारीहरुले यूएई सरकारले तिर्ने भनेका थिए । तर, त्यसअनुसार विमान कम्पनीलाई यूएई सरकारले त्यो भनेको थिएन । त्यसैले विमान नेपाल आउन मानेन ।
त्यहीबेला दुई सेक्युरिटी कम्पनीले आफ्नो खर्चमा त्यहाँ कार्यरत नेपालीलाई काठमाडौं पठाउन तयार भए र मानिसहरु आए । दूताबासले बनाएको सूचीमा भएकाहरु भने आउन पाएनन् ।
म्यानमारबाट आएकामध्ये अधिकांश परिवारलाई भेट्न गएका वेला अलपत्र परेका छन् । केही पढ्न गएका विद्यार्थी पनि छन् ।
पीसीआर परीक्षण नेगेटिभ भएकाहरु मात्र आएकाले शुक्रबारै होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी पठाइएको छ । उनीहरुले पनि उद्दार भएर नेपाल आउन आउँदा सबैले खुशी व्यक्त गरेका छन् । नवलपुर गैँडाकोटका मानबहादुर खत्रीले नेपाल आउन पाउँदा ठूलो उपलब्धि हासिल भएको अनुभूति भएको बताएका छन् । उनले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, ‘नेपाल टेक्नेबित्तिकै आमालाई भेटे जस्तो भयो । आउने बित्तिकै धर्तीलाई ढोगेँ ।’
काँडाघारी, काठमाडौंकी ५३ वषर्ीया लक्ष्मी जोशीले घर र्फकन पाउँदा आफू ढुक्क भएको लक्ष्मीले अनलाइनखबरलाई सुनाइन् । ‘सबै परिवार नेपालै छन्, आफू तीन महिनादेखि उतै अडि्कएँ, मन बेस्सरी पोल्यो’, जोशीले भनिन्, ‘अब पारिवारिक मिलन हुन्छ, मन ढुक्क भएको छ ।’
हिमालय एयरलाइन्स उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले मलेसिया, बाङ्लादेश लगायत मुलुकमा नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयले उडान गर्नुपर्छ भनेर मौखिक प्रस्ताव आए पनि थप जानकारी नभएको बताए ।
उता मलेसिया, कतार र साउदी अरेबियामा कार्यरत नेपाली राजदूतहरुले भने महंगोमा चार्टर्ड फ्लाइट गर्नुभन्दा सस्तोमा नियमित उडानमार्फत नागरिकहरुलाई स्वदेश आउन दिइनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।
सिडियो र प्रवक्ताको पछाडी लुकेको सरकार निस्केर संवाद गर्ने हिम्मत गरोस् – गगन थापा